Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Huteelada Hawaii waxay arkaan hoos u dhaca dakhliga iyo degganaanshaha
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Jabinta Hawaii • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Shuruudaha Safarka Caalamiga ah ee Cusub ee Hawaii
Warshadaha hudheelka Hawaii waxay arkeen hoos u dhac bishii Sebtembar RevPAR iyo deganaanshaha gobolka oo dhan marka la barbar dhigo Sebtember 2019, qayb ahaan sababtuna tahay saamaynta kala duwanaanshaha Delta ee hareeyay baahida safarka.
Hoteelka Hawaii RevPAR wuxuu hoos u dhacay 13.5% bishii Sebtember 2021 marka la barbar dhigo Sebtember 2019 sababtuna tahay deganaanshaha hoose.
Huteelada Hawaii ayaa wali hogaaminaya qaranka RevPAR iyo ADR.
Sagaalkii bilood ee ugu horreeyay 2021, waxqabadka huteelka Hawaii ee gobolka oo dhan waxa sii waday in uu saameeyo masiibada COVID-19.
Hudheelada Hawaii ee gobolka oo dhan ayaa soo sheegay dakhli aad u sarreeya qolkii la heli karo (RevPAR), celceliska heerka maalinlaha ah (ADR), iyo degitaanka Sebtembar 2021 marka la barbar dhigo Sebtembar 2020 markaas oo amarka karantiil ee gobolka ee dadka safarka ah sababtuna tahay masiibada COVID-19 ay keentay hoos u dhac weyn. warshadaha hoteelka. Marka la barbar dhigo Sebtember 2019, gobolka ADR oo dhan wuxuu ka sarreeyey Sebtember 2021 laakiin RevPAR wuu ka hooseeyay degganaanshaha oo yaraaday.
Sida laga soo xigtay Warbixinta Waxqabadka Hotel Hawaii ee ay daabacday Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA), Gobolka oo dhan RevPAR bishii Sebtembar 2021 wuxuu ahaa $168 (+442.6%), iyadoo ADR uu ahaa $304 (+102.7%) iyo deganaanshaha 55.2 boqolkiiba (+34.6 boqolkiiba dhibcood) marka la barbar dhigo Sebtembar 2020. Marka la barbar dhigo Sebtembar 2019, RevPAR ayaa ka hooseeyay, 13.5 boqolkiiba oo ay wado degenaansho hoose (-23.8 boqolkiiba dhibcood) taas oo aan lagu dabooli karin kororka ADR (+23.7%).
"Warshadaha huteelada Hawaii waxay arkeen hoos u dhac bishii Sebtembar RevPAR iyo degganaanshiyaha gobolka oo dhan marka la barbar dhigo Sebtembar 2019, qayb ahaan waxaa sabab u ah saamaynta kala duwanaanshaha Delta ee carqaladeeyey baahida safarka," ayuu yidhi John De Fries, madaxweynaha HTA iyo maamulaha. "Tani waxay ina xusuusineysaa in masiibada aysan dhammaan oo ay tahay inaan feejignaano si aan u ilaalino beelaheena nabdoon iyo soo kabashada dhaqaalaha."
Natiijooyinka warbixintu waxay adeegsadeen xog ay soo ururiyeen STR, Inc., kaas oo sameeya sahanka ugu weyn uguna ballaadhan ee guryaha hoteelka Jasiiradaha Hawaiian. Bishii Sebtembar, sahanka waxaa ka mid ahaa 144 guri oo matalaya 46,094 qol, ama 85.4 boqolkiiba dhammaan guryaha hoyga iyo 86.0 boqolkiiba ka shaqaynta guryaha hoyga leh 20 qol ama ka badan ee Jasiiradaha Hawaii, oo ay ku jiraan kuwa bixiya adeeg buuxa, adeeg xadidan, iyo huteelada is-kaashatada. Guryaha kirada fasaxa ah iyo waqtiyada wadaagga kuma jirin sahankan.
Bishii Sebtember 2021, rakaabka ka imanaya gobol-ka-baxsan waxay dhaafi karaan 10-ka maalmood ee khasabka ah ee Gobolka haddii si buuxda loogu tallaalo Mareykanka ama leh natiijo tijaabo ah oo COVID-19 NAAT oo sax ah oo ka timid Wada-shaqeeyaha Tijaabinta ka bixitaankooda barnaamijka Safarrada Badbaadada ah. Bishii Agoosto 23, 2021, Gudoomiyaha Gobolka Hawaii David Ige wuxuu ku booriyay dadka socotada ah inay yareeyaan safarka aan daruuriga ahayn ilaa dhammaadka Oktoobar 2021 sababta oo ah kala duwanaanshaha Delta oo sababay in nidaamka daryeelka caafimaadka ee gobolka uu culeyskiisu sareeyo.